ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - CZ IT DEVELOPMENT Co., Ltd.
2008 ခုနှစ်မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုက်ပစ္စည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သော ထုတ်ကုန်များသည် သံမဏိပိုက်များ၊ bw ပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ အတုအပပစ္စည်းများ၊ အနားကွပ်အတုများ၊ စက်မှုအဆို့ရှင်များကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။ဘောလ်များနှင့် အခွံမာများ၊ နှင့် gasket များ။ပစ္စည်းများသည် ကာဗွန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ Cr-Mo အလွိုင်းသံမဏိ၊ inconel၊ incoloy အလွိုင်း၊ အပူချိန်နိမ့်သော ကာဗွန်သံမဏိ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။သင့်ပရောဂျက်များအတွက် ပက်ကေ့ဂျ်တစ်ခုလုံးကို ပေးဆောင်လိုပါသည်၊ သင့်အား ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပြီး အလွယ်တကူ တင်သွင်းနိုင်စေရန် ကူညီပေးလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသည်။နိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွေ့အကြုံ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကန်၊ တူရကီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဒူဘိုင်း၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ မော်ရိုကို၊ တောင်အာဖရိက၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျာမန်တို့မှဖြစ်ပြီး၊ on.
အရည်အသွေးအတွက်၊ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ2ကြိမ်စစ်ဆေးပါမည်။TUV၊ BV၊ SGS နှင့် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
CZIT GROUP (စက်ရုံ3ခု၊ အလုပ်သမား 300+၊ 200+customers၊ 19+ နှစ်အတွေ့အကြုံ)
1.Flanges: 3000 တန်/လ
2.Pipe Fittings: 3000 တန်/လ
2.Frame Pole Hammer: 3sets
5.Drilling Machine: 2sets
6. Pushing Machine: 10sets
1.Carbon Sulfur Analyzer-2sets
7.Digital Caliper: 3sets
6. Hardness Tester: 3sets
1.E/Certificate of Origin ဖောင်
5.T/T၊ L/C ငွေပေးချေမှု
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ISO လက်မှတ်ရှိပြီး၊ OEM၊ ODM ကိုလက်ခံပြီး စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ပုံမှန်နှင့်စံထုတ်ကုန်များ၊ MOQ သည် 1PCS မျှသာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စီးပွားရေးကဘာလဲ။မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပြီး ငွေရှာရန်သာဖြစ်သည်။မင်းနဲ့အတူ အများကြီး ပိုကောင်းလာဖို့ ငါတို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။